Ithegi: khokelela gen | Martech Zone
Ithegi: khokela gen
I-Plezi One: Isixhobo sasimahla sokuVelisa iiKhokelo ngeWebhusayithi yakho ye-B2B
NgoLwesibini, Januwari 4, 2022 NgoLwesibini, Januwari 4, 2022 UPaul-Louis Valat
Emva kweenyanga ezininzi kwenziwa, uPlezi, umboneleli wesoftware yentengiso ye-SaaS, usungula imveliso yakhe entsha kwi-beta yoluntu, iPlezi One. Esi sixhobo sasimahla kunye nesiqondakalayo sinceda iinkampani ezincinci neziphakathi zeB2B ziguqule iwebhusayithi yazo ibe yindawo ekhokelayo. Fumana indlela esebenza ngayo ngezantsi. Namhlanje, iipesenti ezingama-69 zeenkampani ezinewebhusayithi zizama ukuphuhlisa ukubonakala kwazo ngeendlela ezahlukeneyo ezifana neentengiso okanye iinethiwekhi zentlalo. Nangona kunjalo, i-60% yazo
Ukukhuphela i-B2B kwi-lead Generation 2021: Izizathu ezili-10 eziphezulu zokuthanda ukuphuma
NgoLwesithathu, nge-6 kaJanuwari 2021 NgoLwesithathu, nge-6 kaJanuwari 2021 UEric Quanstrom
Ukuba ubandakanyeka kuwo nawuphi na umbutho we-B2B, uyakhawuleza ufunde ukuba isizukulwane esikhokelayo siyinto ebalulekileyo yokwenza ishishini. Ngapha koko, iipesenti ezingama-62 zeengcali ze-B2B zathi ukunyusa ivolumu yabo ekhokelayo yeyona nto iphambili. Ingxelo yeGen Demand Nangona kunjalo, akusoloko kulula ukuvelisa izikhokelo ezaneleyo zokuqinisekisa ukubuyela ngokukhawuleza kutyalo-mali (ROI) —okanye nayiphi na inzuzo, ngalo nto. I-whopping ye-68% yamashishini axele ukuba asokoliswa sisizukulwana esikhokelayo, kunye nenye
Iindlela ezi-3 zokuQokelela ngokuLula idatha yeThemba nge-LinkedIn yeefomu zokuKhokela eziDibeneyo
NgoLwesibini, Novemba 14, 2017 NgoLwesibini, Novemba 14, 2017 Douglas Karr
I-LinkedIn iyaqhubeka nokuba sisibonelelo esiphambili kwishishini lam njengoko ndifuna amathemba kunye namaqabane eshishini lam. Andiqinisekanga ukuba usuku aludluli ekubeni ndingasebenzisi iakhawunti yam yobungcali ukunxibelelana nokudibana nabanye. I-LinkedIn iyaqhubeka nokuqonda isikhundla sabo esiphambili kumajelo eendaba ezentlalo, ukuqinisekisa ukubanakho kwamashishini ukunxibelelana nokugaya okanye ukufumana. Abathengisi bayaqonda ukuba iziphumo zokuqokelela ezikhokelayo zincitshiswe kakhulu njengoko kulindelekile
Yintoni ukuthengisa okusekwe kwiakhawunti?
Lwesine, Disemba 10, 2015 NgoLwesibini, Agasti 1, 2017 UDoug Bewsher
Intengiso esekwe kwiakhawunti (Isifinyezo: ABM) ngokukhawuleza iba yimfuneko kwiinkampani zeB2B. Ngokusekwe kuphando lwayo lwabathengisi be-B2B, i-ITSMA iqukumbela: I-ABM izisa eyona mbuyekezo iphezulu kutyalo-mali lwaso nasiphi na isicwangciso sokuthengisa seB2B okanye iqhinga. Ixesha. Isifundo sikaSiriusDecision sika-2015 seNtengiso esekwe kwiAkhawunti (ABM) sifumanise ukuba i-92% yabathengisi beB2B bathi iABM ibaluleke kakhulu okanye ibaluleke kakhulu kwimizamo yabo yentengiso. Ngokuka-Megan Heuer, uSekela Mongameli kunye noMlawuli weQela kwiSirius Izigqibo: